Lepa Dinis, onye na-ese egbugbu | Igbu egbugbu
Mata ndị na-ese egbugbu: Lepa Dinis
Abalị Monday, oge zuru oke, mgbe awa ikpeazụ nke ụbọchị mbụ n'izu gafere, zute onye omenkà na ị ga-agbakwunye na ndepụta gị nke «ndị na-egbu egbu ịtụle ". Taa, anyị na-ewetara gị «Tmara egbugbu"ka Lepa Dinis. Akpọrọ aha ya ma mara ya otu n'ime sexiest egbu egbu egbu, Anyị na-eche ihu onye na-ese egbu egbu bụ onye, ​​dị ka anyị ga-aza mgbe e mesịrị, jikọtara ọrụ ya dị ka ihe nlereanya ọzọ dị ka onye na-ese egbugbu.
Naanị lelee akaụntụ Instagram ya (@lepadinis) ma ọ bụ akaụntụ Facebook gị iji ghọta na onye na-egbu egbu egbu Lepa Dinis bụ ọkachamara na ụdị Japanese. N'ime foto niile nke egbugbu emere, anyị na-ahụ ụdị ụdị egbugbu ndị Japan nke dragọn, kanjis, lotus okooko osisi ma ọ bụ ihe nkpuchi ndị Japan na-abụkarị ihe a na-ahụkarị.
Stylekpụrụ ya egosighi ikuku onye ọ bụla ma ọ bụ jiri mmetụ aka ya, kama ọ dị na "akara" nke ihe anyị maara dị ka ụdị egbugbu ndị Japan. N'agbanyeghị nke a, onye na-ese egbugbu na-eme nnukwu iberibe (aka ma ọ bụ ụkwụ zuru ezu) na-ekepụta egwu dị egwu. Ugbu a Dinis na-egbu egbu na ụlọ ọrụ Irezumi emi odude ke obio London (United Kingdom).
N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na ịbụ onye ama ama ama amaara ama, Lepa Dinis nwere ogologo akụkọ ihe mere eme dị ka ihe nlereanya ọzọ. O meela ọtụtụ ọrụ maka ụdị na ụlọ ọrụ dị iche iche na-egosi akara ya na ịma mma a na-apụghị ịgbagha agbagha. Na nkenke, anyị na-eche onye omenkà nwere ọtụtụ akụkụ nke nwere ike ịme ka à ga-asị na ọ bụ akara ezigbo ọrụ nka Asia na anụ ahụ, dị ka anyị na-ekwu nke ọma.
Foto nke egbugbu Lepa Dinis
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Mata ndị na-ese egbugbu: Lepa Dinis
Egbu egbugbu agakwaghị abụ “ihe mgbochi” ịkwalite na ndị nchekwa obodo
The Vanguard na egbugbu, isiokwu nke esemokwu